अविवाहित नायिका आँचल शर्माले किन गरिन विवाहित उदीप श्रेष्ठसंग विवाह,यस्ता छन् कारण ! - Icatch Khabar
अविवाहित नायिका आँचल शर्माले किन गरिन विवाहित उदीप श्रेष्ठसंग विवाह,यस्ता छन् कारण !
पढ्ने समय: < 1 मिनेट/-
काठमान्डौ। ‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट नेपाली फिल्ममा भित्रिएकी अभिनेत्री आँचल शर्माले डेढ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेकी छन् । बिहीवार उनले प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । बुढानिलकण्ठस्थित होटल पार्क भिलेजमा हिन्दू परम्पराअनुसार आँचल र उदिपले विवाह गरेका हुन् ।
गत हप्ता आँचलले चिकित्सक डा. उदिप श्रेष्ठसँग विवाह गरिन्, त्यो पनि करोडौं खर्च गरेर । फेसबुकमा विवाहको तस्बिरहरु हालिन् । आँचलले विवाह गरेका उदीप श्रेष्ठको दोस्रो विवाह हो । उनको यसअघि विदेशीसँग विवाह भएको थियो । उदिपसँग धनसम्पत्तिका कारण नजिकिएको फिल्मि बजारमा हल्ला छ। उदिप धनी परिवारका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस लोक सेवाले मानेन सर्वोच्चको निर्देशन : विपन्नप्रति विभेद यथावत
अघिल्लो लेखमाज्येष्ठ नागरिक पार्क बनाउन फैसला गरेको करोडौं मुल्यको सार्वजनिक जग्गा निजी उद्योगलाई
अर्को लेखमाडा.रमेश आचार्यद्वारा कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को महामारी,रोकथामकका लागि गरिएको ज्ञापनपत्रको बारेमा प्रेस विज्ञप्ति सम्पन्न
यो पनि पढ्नुहोस मध्यरातिदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द, आन्तरिक यथावत्